I Alumina Substrate China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Alumina Substrate - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-I Alumina Substrate)
Ama-discs we-Alumina ceramic valve disc aqokiwe ukuthi ahlangane nensimbi ehlukahlukene yokubeka uphawu ngenxa yokumelana kwayo okuphezulu kanye ne-anti-chemistry. Ifektri yethu inikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zama-disc ze-ceramic valve disc ezinobukhulu obuhlanganisiwe, ikhwalithi yokuhlobisa enhle,...
Ukuze kuhlukaniswe i-stator ye-ceramic ne-ceramic rotor kumadivayisi wokubopha ekukhiqizweni, amanye amakhasimende adinga umbala okhethekile ngalezi zimpawu zokuswina ze-ceramic. Siyakwazi ukukhiqiza imibala ehlukile ye-alumina ceramic disc yepompo yamanzi, okujwayelekile kupinki noma kumnyama. Kungani ukhethe i-...
Isinongo esihle se-spice se-alumina se-ceramic grind yokugaya
Spice grinder alumina Ceramic yokugaya burr I-Alumina ceramic iyona evuthiwe kunazo zonke kwezindabuko zobunjiniyela, enikeza izakhiwo ezinhle kakhulu zokufakelwa kukagesi ngokuqina okuphezulu nokuqina okuhle, kepha amandla aphansi impela kanye nokuqina kokuqina. Ngenxa yalezi zakhiwo, lokhu kusebenza kuthandwa...
I Alumina Substrate
5% i-Alumina Ceramic Substrate